Tana Masoandro: Tompon'andraikitra ihany koa ny mpifidy
lundi, 21 octobre 2019 13:06
Lasa tabataba ankehitriny ilay tetikasa fanorenana Tana Masoandro, veliranon'i Kandida Andry Rajoelina. Tsy nanafina ireo vina sy ny fomba ahatongavana amin'izany izy nandritra ny fampielezan-kevitra nataony.
Nambarany tamin'izany, miaraka amin'ny sary, fa dia manomboka eo Ampasika, ny tetezana mihazo an'Itaosy, ka hatrany Ambohitrimanjaka rehetra no hanatanterahiny ny tanàna Tana Masoandro.
Nolazainy tamin'izany ihany koa, fa mirefy 1000 ha ny velaran-tany avaozina tanteraka amin'izany, ary dia nazava toa ny masoandro be lohataona ny fomba anatanterahiny azy.
Hoy ny Kandida Andry Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitra: "Amidy amin'ireo mpandraharaha ny tany 100ha ahafahana mamelomboly (viabiliser), anamboarana lalana sy birao, ary afindra eny amin'ny Tana Masoandro ny biraom-panjakana rehetra".
Lany izy, ny Distrika Ambohidratrimo, izay tena voakasik'ity tetik'asa ity dia nifidy azy tamin'ny isa 51 371 na 40.38%, tonga nifidy 129 686 tamin'ireo 243 688 voasoratra anarana, izany hoe 53.21% ny taham-pahavitrihan'ireo mpifidy. Ny 46.78% nidongy tsy nandeha nifidy.
Lany Filoham-pirenena andriamatoa Andry Rajoelina, miroso amin'ny fanatanterahina ny Vina sy ny velirano nataony izy.
Tsy hidirana lalina aloha hatreto ny fanajana na tsia ireo fepetra atao raha haka ny tanin'olona, fa hijanona fotsiny aloha isika amin'ny andraikitry ny tsirairay.
Raha ny lisitry ny toerana voakasika akaiky amin'ity tetikasa Tana Masoandro ity andiany voalohany, izany hoe ilay 100ha, tsy mazava aloha raha io ilay tany amidy amin'ny mpandraharaha, amelomana ilay 1000ha voalaza tamin'ny fampihelezan-kevitra:
* Kaominina Antananarivo Renivohitra Boriborintany faha 6:
- Anosibe Zay Vola
* Kaominina ambanivohitra Ambohidrapeto
*Kaominina ambanivohitra Ankadimanga
* Kaominina ambanivohitra Fenoarivo
* Kaominina ambanivohitra Fiombonana
- Anosy Vita Boina
* Kaominina ambanivohitra Itaosy
* Kaominina ambanivohitra Ambohitrimanjaka
- Mahitsy Avaratra
- Mahitsy Firaisana
- Ambatolampy Atsimo
Mazava ho azy, fa ireo faritra rehetra eo Ampasika manodidiana ny tetezana hiazo an'Itaosy, dia tsy maintsy ho voakasika ihany koa aoriana kely eo, raha ny sary naseho hatrany no resahina.
Ka zava-dehibe izany ny fifidianana amin'ny alalan'ny vinam-piaraha-monina naroso, fa toa hamaivanintsika izy ireny, sondriana tamin'ny tee-shirt sy fotsim-bary, ka rehefa lany ilay olona tamin'ny velirano nataony, dia kofona indray isika. Mitabataba hatramin'ireo nidongy tsy nandeha nifidy hoe very ny Tanindrazanay.
Hisariako ny sain'ny mpanantanteraka anefa, dia aza mamoron-dainga, na manamboamboatra taratasy etsy sy eroa hilazana fa efa natao avokoa ireo dingana voalazan'ny lalàna amin'ny fakana tanin'olona, na ny resaka tontolo iainana izay tsy vita vetivety izany.
Raha nisy dingana tsy natao, na tsy azon'ny olona tsara, dia avereno hatrany amboalohany, antsoy ireo voakasik'izany, mifampidiniha. Raha tsy mety, dia malalaka i Madagasikara, azo afindra tsy lavitra io tetikasa io.
Raha efa namidy tokoa ny tany, araka ny fampielezan-kevitra natao, dia asio mangaraharaha, iza no nividy ny tany, namidy ohatrinona, ary hifampiresao amindrana amin'ny toerana hafa raha tsy misy marimaritra eo amin'ny toerana nokasaina anorenana izany Tana Masoandro izany.
Ny taratasy ahelin'ny mpitondra momba io resaka io, dia taratasy lazainy fa diso daty tamin'ny volana jona, taona 2018, nefa na ny tampon mena aza dia voatsindry ao ambanin'ilay anaran'ilay minisitra manao sonia, ary en-tête direction no anaovany sonia, fa tsy en-tête mahaminisitra azy.
Aoka hakarina ny ady hevitra, ny zava-dehibe eto, dia ahoana no ahatanteraka ilay tetikasa, izay tsara ary nahalany ny Filoham-pierena, fa ahoana koa ny momba ny Malagasy izay sarotiny amin'ny taniny, indrindra fa raha namidy amin'ny vahiny ny taniny.
Takiana ny mangaraharaha, ary aza raisina ho bado ny tompon-tany sy ny vahoaka Malagasy manontolo.